Banyere Anyị - Jiangsu Xingyong Aluminium Technology Co., Ltd.
Aluminom ịgbado ọkụ Waya
Jiangsu Xingyong Aluminom Technology Co., Ltd. Guzosiri ike na 2011. Ihe karịrị 100,000 square mita ， Na ihe karịrị ndị ọrụ 300 na ọtụtụ ndị otu njikwa nwere agụmakwụkwọ ka elu, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na -ejikọ nyocha sayensị, mmepụta na azụmaahịa.
Enwere ahịrị extrusion aluminom, anodizing aluminom, ahịrị nhazi nke Aluminom, ebe nnwale, ahịrị ngwugwu, ahịrị mmepụta 18 kpamkpam. Nhazi ahịrị gụnyere CNC punching, ịgbado ọkụ, mkpọpu ala, ịcha, ekwe, mebie, gbasaa, ebi akwụkwọ, laser wdg.
Site na usoro nrụpụta dị elu nke ngwaahịa aluminom na ngwaahịa plastik na ikike mmepụta kwa afọ nke tọn 30,000 nke ngwaahịa aluminom na tọn 2,400 nke ngwaahịa plastik, ụlọ ọrụ ahụ bụ onye na -ebubata ngwa ahịa ụlọ ọrụ nhicha mmiri na China. Ngwaahịa gụnyere aluminom alloy telescopic rod, aluminom alloy gburugburu tube, aluminom alloy corrugated tube, aluminom alloy square tube, aluminum alloy hexagonal tube, aluminom alloy siri ike mmanya, wdg, mop, rollers ákwà, shọvel snow, ụgbọ ibu, nhicha ahịhịa, aka, wdg.
A na-eji ngwaahịa anyị n'ọtụtụ ụgbọ elu, ụgbọ mmiri, ụgbọ okporo ígwè dị elu, ụzọ ụgbọ oloko, tram, ụgbọ ala, ọgba tum tum, ịnyịnya, ịnyịnya ígwè, igwe eletriki 3C, ngwaọrụ ahụike, arịa ụlọ dị elu, oriọna LED na oriọna, profaịlụ aluminom obodo, aluminom ụlọ ọrụ. profaịlụ na mpaghara ndị ọzọ. A na -ebupụ ngwaahịa anyị n'ụlọ na mba ofesi ma ndị ahịa anyị tụkwasịrị ya obi nke ukwuu.
Jiangsu Xingyong Aluminium Technology Co., Ltd. agabigala ISO 9001: 2015 na ISO/TS 16949: 2016, akwụkwọ ikike ndebanye aha "Xing Yong Lv Ye", ọtụtụ akwụkwọ ikike patent nlereanya, nyocha mbata ọpụpụ na ndekọ ụlọ ọrụ nyocha iche. ụdị, ndị na -ahụ maka azụmaahịa mba ofesi na -edekọ ụdị ndebanye aha, akwụkwọ ndebanye aha kọstọm na ngalaba ndebanye aha nke mpaghara Jiangsu.
Ngwaahịa a na -ere nke ọma na American, Euro, Australia, Canada, Japan, South Africa, Chile Etc.
Anyị na -akwado mmụọ nke ịkwụwa aka ọtọ, nkwekọrịta, ịga n'ihu na nhazigharị na echiche nke ndị ahịa mbụ na arụmọrụ dị elu na ihe ọhụrụ, wee were ihe kpatara mmepe na -adigide.
Anyị dị njikere ka anyị na ndị ahịa ụlọ na ndị si mba ọzọ na -arụkọ ọrụ iji duzie akara ụlọ ọrụ ma mepụta ịdị n'otu.
Mba 222, huaihe East Road, Huaiyin District, Huaian City, Jiangsu China